I-Raw Sunifiram powder (314728-85-3) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-Sunifiram (DM-235) powder yiluhlobo lwe-nootropics. Kuyinto eyingqayizivele etholakalayo yokwenziwa kwe-piracetam ngenkumbulo, ukufunda, imizwa yokuthuthukisa ...... ..
Umthamo: 1285kg / inyanga
I-Raw Sunifiram powder (ividiyo ye-314728-85-3)
I-Raw Sunifiram powder, eyaziwa nangokuthi i-DM-235, iyisimo esisha esithakazelisayo ekuthuthukiseni izithako ezisezingeni eliphezulu. Kuhlelekile ngokufana ne-nocotam nootropics kodwa ngamahora angu-1,000 anamandla kune-piracetam.
I-Raw Sunifiram powder iyaziwa ukusebenza ngokukhuthaza umsebenzi we-glutamate receptors futhi ngokwandisa ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-"neurotransmitter yokufunda" i-acetylcholine. Kukholelwa ukuthi isenzo esiyinhloko sikaRaw Sunifiram se-ampakine, okusho ukuthi ngemva kokuwela I-blood-brain barrier ibophezela ku-AMPA-uhlobo lwe-glutamate receptors ebuchosheni. Lokhu kukhuthaza ukukhiqizwa kwe-glutamate, i-neurotransmitter ebalulekile edlala indima ebalulekile ekusebenziseni kwe-neural.
I-Glutamate yi-neurotransmitter yokuzijabulisa ebaluleke kakhulu eplastiki ye-synaptic, noma ikhono le-nerve synapses ukuphendula ukwanda noma ukunciphisa umsebenzi.I-Raw Sunifiram powder nayo icatshangwa ukuthi iyasebenza njenge-cholinergic, ikhulisa ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-neurotransmitter acetylcholine.
I-Raw Sunifiram powder (314728-85-3) Siziqu
Igama Product I-Raw Sunifiram powder
Igama leKhemikhali I-DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) propan-1-eyodwa, iPiperazine
Brand NAme I-Raw Sunifiram powder, i-DM-235
CAS Inombolo 314728-85-3
I-molecular Fi-ormula C14H18N2O2
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-246.304 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic 246.31
Ukuxuba Pi-oint I-98-100 ° C
I-Half Half-Life 4.5-6.5 amahora
Sukufaneleka Ukungahambi kahle, okomile kanye nokuphuza umoya
Aukuphikisana Thuthukisa iMemori, Thuthukisa ukufunda nokunciphisa ubuhlungu bokuzwela, njll.
Raw I-Sunifiram powder (314728-85-3) Incazelo
I-Sunifiram (i-DM-235) yi-piperazine etholakala e-ampakine-like drugs, Yakha ngokufana ne-nocotam nootropics kepha izikhathi ezi-1,000 zinamandla kune-piracetam. Ukucwaninga okuncane kakhulu okwamanje kuyatholakala, kodwa izifundo zokuqala zesilwane zikhombisa ukuthi zingase zibe i-nootropic ephumelelayo kakhulu kanye nokwelapha okungenzeka kube nezinkinga ezihlukahlukene zezinzwa ezihlanganisa isifo se-Alzheimer, isifo sika-Parkinson, nesifo se-amnesia.
I-Sunifiram yaqala ukuhlanganiswa ku-2000 ngabososayensi e-University of Firenze e-Italy. Ucwaningo lubonisa ukuthi i-sunifiram powder ingase ikhulise amandla ochopho, isimo sengqondo, namandla ngisho nalapho kuthathwa amanani aphansi kakhulu.
I-Sunifiram powder (314728-85-3) Inqubo yesenzo
Indlela yokusebenza kwe-sunifiram ayiziwa, kodwa iyaziwa ngokuvuselela umsebenzi we-glutamate receptors futhi ngokwandisa ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-"neurotransmitter" yokufunda i-acetylcholine.
I-Sunifiram ivuselela i-glutamate receptor, i-NMDA. Ukwandisa izinga lapho i-glutamate (i-neurotransmitter) ihanjiswa phakathi kwamaseli enhliziyo yobuchopho. Lokhu kungasiza ukubuyisela inkumbulo ukusebenza kuzinhliziyo ezilimaziwe noma eziguqulwe ngokuhlinzwa.
I-Sunifiram powder yandisa futhi ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-neurotransmitter acetylcholine. I-Acetylcholine isondelene kakhulu nezici eziningi zokuqaphela, kufaka phakathi imemori, isivinini sokufunda kanye nekhono, nokuhlakanipha kobuchopho noma amandla okuxazulula izinkinga ezihlukile ngaphandle kokuthembela ekuziphatheni okufundiwe.
Izinzuzo of I-Sunifiram powder (314728-85-3)
Kuthuthukisa ukufunda nokukhumbula
Kwangathi Kungcono Ukugxila, Ukugqugquzela, Nokuqonda Kwengqondo
I-Mood ne-Energy Booster
Ukuthuthukiswa okubonakalayo nokuqonda
Kunconywe I-Sunifiram powder (314728-85-3) Isilinganiso
Ngokusekelwe kuhlanganiswa kwemibiko yomsebenzisi nolwazi olutholakala ezifundweni zezilwane, umthamo we-5-10 mg ozithathiwe izikhathi ezintathu ngosuku kubhekwa njengokubili okuphephile futhi okuphumelelayo.Usebenza kahle uma ukhonjiswe ngokulinganisa.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo of I-Sunifiram powder (314728-85-3)
Kusukela manje, akubonakali nemiphumela emibi ye-sunifiram powder kusuka ocwaningweni noma kumbono wesayensi.
Imibiko emibi ebikwa ngumsebenzisi kokubili ingamancane futhi yesikhashana futhi ifaka ukukhuphuka kokushisa komzimba, ukujuluka komzimba nokukhuphuka, ikhanda lokukhwabanisa, ukugcoba okungcolile, ukuzwela okwedlulele ekuboniseni okubonwayo nokulalelwayo, nokulala. Kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuthi akukho mfundo yomuntu noma izilingo zomtholampilo ezenziwe.
I-6-Paradol powder emifushane (27113-22-0)